Torohevitra avy amin'ny Semalta 5 Torohevitra Hanodinana Data avy amin'ny tranonkala iray
Tsy ao anaty format malalaka ny data, fa misy ao amin'ny Internet. Ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao dia misy amin'ny fiteny samihafa, ka sarotra amintsika ny mahatakatra izany ary tsy azo henoina ny zava-drehetra ao amin'ny CSV na ny format hafa. Amin'ny toe-javatra toy izany dia sarotra aminao ny mampiasa ny fampahalalana araka ny tokony ho izy. Azonao atao koa ny mampifangaro azy amin'ny daty ary hijery azy tsy miankina. Noho izany, ny fanalana ny angon-drakitra dia ny hany fomba hamoronana kopia amin'ny endrika azo vakina sy mora azo.
1. Ampiasao ny Google Spreadsheets sy Google Chrome
Azo antoka fa ny soso-kevitra Google Chrome sy Google spreadsheets dia manampy amin'ny fampihenana ny angon-drakitra mandritra ny 5 minitra, ary tsy mila mampiditra fehezanteny mihitsy ianao. Ny fahafantarana ny fametrahana ny tranonkalanao no dingana voalohany amin'ny fametahana sy fampiasana ireo angona. Ny fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia ny baikon'ny ImportHTML ao amin'ny Google Spreadsheets. Miasa toy ny magika izy ary manala ny tranonkalanao manontolo tsy manelingelina ny kalitao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa rindrambaiko izay manintona Chrome ary tonga miaraka amin'ireo endri-javatra maro.
2. Ampiasao Scraperwiki mba hahazoana valiny tsaratsara kokoa
Raha te hikapoka ny tahiry be pitsiny ianao ary tsy manana fahaiza-manao fandrindrana, dia mila manandrana Scraperwiki ianao mba hahazoana valiny tsaratsara kokoa. Manampy amin'ny fanivanana ireo pejy Wikipedia sy tranokala mavesatra izany ary mamoaka ny tranonkala iray manontolo ao anaty fiara mafy ao anatin'ny minitra vitsy. Ity fitaovana ity dia mendrika ny hampiasa ny herinao sy ny fotoanao ary hiantoka ny vokatra tsara indrindra sy marina indrindra. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny sinoa mandarina Dikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisy sinoa Anarana iombonana amin'ny teny sinoa Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny sinoa Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny sinoa.
3. Fantaro ny endriky ny fanakona
Zava-dehibe koa ny mahatakatra ny rafitry ny mpangalatra. Ny ankabeazan'ireo mpandika vilana dia simba amin'ny fizarana telo: ny laharam-pandaharana handrafetana, ny faritra ho an'ny tahiry voafantina ho tahiry, toy ny database, ary ny downloader na parser izay manampy ny URL eo amin'ny andalana.
4. Fantaro ny dikan'ny fangalarana:
Ny fingodongodona dia ny fomba hanangonana ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala isan-karazany, tahiry PDF, ary antontan-taratasy hafa, izay mahatonga azy io azo ampiasaina sy azo vakiana ho an'ny fanitsiana fanampiny. Izany dia iray amin'ireo fomba mahasoa sy mahafa-po indrindra azonao ampiasaina hanangona sy hampiasa ny angona. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy ilainao ny manana fahaizana fandaharana mba hampihenana ny angon-drakitra raha mampiasa fitaovana toy ny Kimono ianao sy ny fandefasana azy. io.
5. Fantaro ny fomba hikapohana azy:
Tokony hianatra ny fomba hikapoka raha te-hanangona tahirin-kevitra avy amin'ny tranonkala isan-karazany ianao. Ankoatra izany, afaka mianatra izany ianao rehefa manana fanamafisam-peo marobe mba ho gaga sy te hampiasa azy ao amin'ny tranonkalanao. Raha mahazo fampandrenesana mailaka momba ny vokatra sy serivisy mahaliana ianao, dia azonao atao ny manasitrana sy mianatra ny fotokeviny. Marina fa ny asa fanadiovana dia asa tsotra izay mitaky fahaiza-manao fandaharana vitsivitsy. Ny sasany ny fitaovan'ny tranonkala dia tsy mitaky anao hianatra fahaiza-manao sy programa eo amin'ny programa, izay midika fa afaka manao ny asanao ianao raha tsy misy fehezan-dalàna Source .